I-Bakubung Bush Lodge - I-Pilanesberg National Park - e-Sun City Safari
Bakubung Bush Lodge inikeza izakhamuzi ithuba lokuhlala e-Sun City safari lokuhlala endaweni ePilanesberg National Park eduze nokuzijabulisa kweSan City enamandla.
Ikhaya le-Big Five eNingizimu Afrika
Indawo yokuhlala e-Sun City
Ngaphandle kokushayela kalula eGoli
ekhona e-Pilanesberg National Park ekhona e-malaria
I-Bakubung Bush Lodge ilungile njengenye indlela yokuhlala yaseSun City, kude nomuzi omkhulu. I-Pilanesberg National Park ehlala e-malaria i-Pilanesberg National Park, ungabheka phambili emotweni yemidlalo ejabulisayo ehlathini lase-Afrika ngenkathi uhlala ebangeni elilula lokushayela ebukhazini be-Sun City.
Indawo yokuhlala yasehhotela yaseSun City inikezwa ngamakamelo okulala aphethwe umoya omusha noma izintambo ezikhululekile. Igumbi ngalinye lineziteshi ezilinganiselwe ze-DSTV (i-satellite satellite) kanye ne-en-suite yokugeza. Izivakashi zingasheshe zivakashele i-Sun City ngokuzikhandla ngensizakalo yokuhamba ngebhasi ngemali ebizwa ngokuthi i-Bus.
Sebenzisa ekuseni emdlalweni wezemidlalo ukufuna i-Big Five (Lion, Rhino, Elephant, Leopard noBuffalo) ngaphambi kokubuyela emgodini oqabulayo echibini lokubhukuda laseBububung. Izingane zingayithokozisa i-Children's Adventure Playground ngenkathi uphumule ngezokwelapha zokwelapha ezithokozisayo e-Noko Kalahari Spa.